KYAW CHAN NYEIN: နံရံပေါ်မှ အဆိုအမိန့်များ
၁။ အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု နှစ်ခုက အချိန် နဲ့ မိဘ ပါဘဲ ။
၂။ လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဘိုးဆိုတာ အလုပ်လုပ်ခြင်းဘဲ။
၃။ အခက်ခဲဆိုတာငြီးတွားဘို့မဟုတ် -ကျော်လွှားရန်ဖြစ်သည်။
၄။ ဆင်ခြေပေးတဲ့ပါးစပ် ထမင်းငတ်တတ်တယ်။
၅။ ဂုဏ်သိက္ခာပါသော အောင်မြင်မှုသာမြတ်နိုးပါ။
၆။ မနာလိုမဖြစ်နဲ့- လုပ်တတ်သူကနေရာရမှာဘဲ။
၇။ ကြောက်တတ်တယ်ဆိုတာ မခိုင်လုံလို့။ မေ့တတ်တယ်ဆိုတာ မလေးစားလို့။
၈။ ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ပါ--- ဒါပေမယ့် မြေကြီးနဲ့ ခြေထောက်မလွတ်စေနဲ့၊။
၉။ နှေးတာအရေးမကြီးဘူး ၊ရပ်မနေဘို့လိုတယ်။
၁၀။ မလုပ်တတ်ကြောင်းများများပြောလေ- မလုပ်တတ်လေ။
၁၁။ အကျင့်စာရိတ္တဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ကံကြမ္မာ။
၁၂။ လူ့ဘုံဆိုတာ လုံ့လဝီရိယဘုံပါ။
၁၃။ ဘဝတိုင်းကိုဖျက်ဆီးနေတာ မာနတရားပါ။
၁၄။ နေသလိုဖြစ်တဲ့ဘဝမှာ ဖြစ်သလိုမနေနဲ့။
၁၅။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ကြည့် ၊ကိုယ့်ဘဝကိုယ်သိ ၊ လဲရင်ပြန်ထ ဒါဘဝ။
၁၇။ ဘဝကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ဒုက္ခဆိုတဲ့ရန်သူကို ဇွဲနဘဲဖြင့် အလဲထိုးအနိုင်ယူပါ။
၁၈။ လုပ်ချင်တာထက် လုပ်သင့်တာကိုဦးစားပေးပါ။
၁၉။ ရောဂါပြင်းလျှင်ဆေးရှိသည် - လူပျင်းလျှင်ဆေးမရှိ။
၂၀။ အချိန်ဖြုန်းခြင်းဟာ ဥစ္စာဓနဖြုန်းခြင်းတစ်မျိုးဘဲ။
၂၁။ အပြောနဲ့မလုပ်ဘဲ ၊အလုပ်နဲ့ပြောပါ။
" Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don't quit - Conrad Hilton "